Manamboara Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr, Countdown, na Widget hafa
Alatsinainy, Jolay 2, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Widgets dia apetraka ambanin-javatra fampiharana izay afaka mitondra fifamatorana. Raha ara-teknika, ny widgets dia fampiharana kely na micro izay mety hapetraka ao anaty tranokala. Ny ankamaroan'ny famantaranandro, mpamaky isa, ary fampahalalana mavitrika hafa amin'ny pejin-tranonkala dia widget fotsiny. Ao amin'ny tranokalanay, hahita vitsivitsy ianao - lahatsoratra avo lenta, Twitter, Podcast ary Facebook fanolorana lahatsoratra.
Ny Widgets dia mamela ny fampitana fampahalalana manjavozavo ho amina fivoriana ifanakalozana, izay azo inoana fa hisarika ny sain'ny mpitsidika tranonkala. Ohatra, ny widget misy ny valim-pifidianana dia mitarika ny mpitsidika fitsapan-kevitra noforonina tao amin'ny tranokala, ny widget Facebook dia mety hitarika ny pejy sosialin'ny marika. Ny Widgets dia manampy ihany koa ny tatitra mitambatra, manome hery azy io amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra miorina amin'ny fanadihadiana.
Ny sakana lehibe indrindra misy ireo widgets taloha dia ny fampivoarana azy ireo. WidgetBox manolotra widget efa vonona ho an'ny tanjona maro samihafa. Manolotra widget 46,000 mahery, miaraka amina safidy azo ovaina, azo sintonina avy hatrany ao anaty kaody pejy web. Izy io koa dia mamela ny mpivarotra hamorona ny fomban'izy ireo manokana amin'ny tsindry vitsivitsy monja amin'ny totozy, ary handika sy hametaka ny kaody novokarina ho an'ny habaka takiana ao amin'ny kaody webpage.
Jereo ny topy maso ny WidgetBox:
Widgetbox dia manampy anao koa hanaraka izay nampiasa ny widget ary aiza. Satria ny widgets tsirairay dia kapila misy serivisy manokana, dia azon'ireo mpivarotra atao ny mamantatra izay serivisy manokana manintona ny ankamaroan'ny mpihaino, ny demografika ny fangatahana, ary ny fanadihadiana hafa manandanja.
2 Jul 2012 amin'ny 5:04 PM
Tsara izany! Misaotra betsaka amin'ity fitaovana tsara ity!
Ny fananana widget any amin'ny pejin-tranonkalanao dia heveriko fa
tena zava-dehibe amin'ny orinasa. Tsy hoe tokony hanana widget izy ireo
ny zavatra rehetra sy ny zavatra rehetra rahateo: ny zavatra be loatra dia zavatra ratsy. fa
rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy ary amin'ny antonony, ny widgets dia mety ho marketing tsy mahasoa
Fitaovana. Nahoana? Satria mamela ny mpampiasa an-tserasera hiditra amin'ny FB anao mora foana,
Myspace, Twitter, Flicker, Youtube, sns.
Widgetbox dia toa nanamora ny fanampiana fitaovana hafa
miaraka amin'ireo widgets-n'izy ireo ihany koa ho an'ny fitsapan-kevitra, endrika, fampisehoana an-tsary sns. Amin'ny ankapobeny dia tonga izy io
hatrany amin'ny moramora ho an'ny mpampiasa anao ny mifanerasera amin'ny marikao.
Fa tsy hoe rehefa ataonao mora amin'ny alàlan'ny widget dia tsy midika akory izany
hahomby ianao. Tokony ho azonao antoka fa tsara ny atiny. Fantatro National
Tena tsara izany. Nifantoka tamin'ny fampifandraisana ny atiny kalitao ry zareo
mora ampiasaina vetivety. Azoko antoka fa mampiditra widget amin'ny fitaovan'izy ireo izy ireo
Toy izany koa isika rehetra!